Live လွှင့်ရင်း ဖင်လှန်ပြလိုက်လို့ အမေရဲ့အဆူကို အတော်လေးခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မိုးအောင်ရင် – Online News Post
Live လွှင့်ရင်း ဖင်လှန်ပြလိုက်လို့ အမေရဲ့အဆူကို အတော်လေးခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မိုးအောင်ရင်
ဆယ် စုနှစ် ကျော်တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု တွေကို ရရှိထား သူကတော့ သရုပ် ဆောင် မင်းသားချောလေး မိုးအောင်ရင်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ လူငယ်ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ရွေးချယ် ဝတ်ဆင်တတ်တာကြောင့် လည်း မိန်းက လေး ပရိသတ်တွေ က ကြွေနေ ကြတာပါ ။ မိုးအောင်ရင်ဟာ လ တ် တလော အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ မရှိသေးတာ ကြောင့် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုကို လုပ်ကိုင် နေတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
ယခုရက်ပိုင်း မီဒီယာတွေ့ဆုံမှု တစ်ခုမှာ တော့ မိုးအောင်ရင် က Live မှာဖင်လှန်ပြ လို့ အမေဆူ ခံရတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့ တာဖြစ်ပါ တယ် မိုးအောင်ရင် က ” “ Live မှာ ဖင်လှန် ပြခဲ့မိ လို့ အေ မက စိတ်ဆိုး ပြီး Live ထပ်မလွှ င့်ဖို့ အထိ ပြောခံ ရတယ်။ အမေ နဲ့ သိပ် စကား မပြောရဲ သေးဘူး ။ Live မှာ ပရိသတ် တွေ ရဲ့ Comment တွေ ပြန် ဖတ်ပြီး ပျော်ရ ပါတယ် ။ ကိုယ် ရှက် လို က်ရတာ က တစ်ခဏပါ.. ပရိသတ် တွေ ကျေနပ် သွား ရင် ပျော်ပါ တယ် ” လို့ ပြောလာခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ် … .
“ကျွန်တော် က Live. လွှင့်ရင်း ဒီ Post က 2K ရရင် ဖင်လှန် ပြမယ်ဆိုပြီး နောက် လိုက်တာပါ အဲဒါကို3K လောက် အထိ ချက်ချင်း ကြီး တက်သွား တော့ ကွိုင်ပြီ ဆိုပြီး တွေး လိုက် သေး တယ် နောက်တော့ ဖင်လှန်ပြတာပဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ တော်ကြာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဆိုးနေပါဦးမယ် ဆိုပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါလို့ ဆက်လက် ပြောပြလာခဲ့ တာပါမိုးအောင်ရင်က တော့ Li ve မှာဖင်လှန်ပြလို့ အမေဆူခံရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော် အဆုံးထိဖတ် ရှုပေးကြတဲ့အ တွက် ကျေးဇူးတင် ပါ တယ် နော် … .
photo credit : Moe Aung Yin
crd : ( Shwe Yaung Myanmar )
ဆယ္ စုႏွစ္ ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာ တြင္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ တစ္ခဲနက္ အားေပးမႈ ေတြကို ရရွိထား သူကေတာ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ မင္းသားေခ်ာေလး မိုးေအာင္ရင္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ လူငယ္ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ေလးေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္တတ္တာေၾကာင့္ လည္း မိန္းက ေလး ပရိသတ္ေတြ က ေႂကြေန ၾကတာပါ ။ မိုးေအာင္ရင္ဟာ လ တ္ တေလာ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြ မရွိေသးတာ ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ယခုရက္ပိုင္း မီဒီယာေတြ႕ဆုံမႈ တစ္ခုမွာ ေတာ့ မိုးေအာင္ရင္ က Live မွာဖင္လွန္ၿပ လို႔ အေမဆူ ခံရတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပလာခဲ့ တာျဖစ္ပါ တယ္ မိုးေအာင္ရင္ က ” “ Live မွာ ဖင္လွန္ ျပခဲ့မိ လို႔ ေအ မက စိတ္ဆိုး ၿပီး Live ထပ္မလႊ င့္ဖို႔ အထိ ေျပာခံ ရတယ္။ အေမ နဲ႔ သိပ္ စကား မေျပာရဲ ေသးဘူး ။ Live မွာ ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ Comment ေတြ ျပန္ ဖတ္ၿပီး ေပ်ာ္ရ ပါတယ္ ။ ကိုယ္ ရွက္ လို က္ရတာ က တစ္ခဏပါ.. ပရိသတ္ ေတြ ေက်နပ္ သြား ရင္ ေပ်ာ္ပါ တယ္ ” လို႔ ေျပာလာခဲ့ တာျဖစ္ ပါတယ္ … .
“ကၽြန္ေတာ္ က Live. လႊင့္ရင္း ဒီ Post က 2K ရရင္ ဖင္လွန္ ျပမယ္ဆိုၿပီး ေနာက္ လိုက္တာပါ အဲဒါကို3K ေလာက္ အထိ ခ်က္ခ်င္း ႀကီး တက္သြား ေတာ့ ကြိဳင္ၿပီ ဆိုၿပီး ေတြး လိုက္ ေသး တယ္ ေနာက္ေတာ့ ဖင္လွန္ျပတာပဲ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးကြာ ေတာ္ၾကာ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဆိုးေနပါဦးမယ္ ဆိုၿပီး လုပ္ျဖစ္သြားတာပါလို႔ ဆက္လက္ ေျပာျပလာခဲ့ တာပါမိုးေအာင္ရင္က ေတာ့ Li ve မွာဖင္လွန္ျပလို႔ အေမဆူခံရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ အဆုံးထိဖတ္ ရႈေပးၾကတဲ့အ တြက္ ေက်းဇူးတင္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အရှင်းသားဖေါ်ပြလိုက်ပြီး သူမပရိတ်သတ်တွေကို စွဲဆောင်ညှို့ယူလိုက်တဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် ပြသထားတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး